कसरी हुनेछ संग प्राप्त र अमेरिकी. याहू जवाफ
साधारण रूसी मान्छे छ, र म पढ्न यो मंच केही दिन. पढाइ धेरै प्रश्न, म देख्न मा धेरै अमेरिकी सबै छैन, प्रतिनिधित्व रूपमा बाँच्न रूस मा, धेरै लाग्छ, उदाहरणका लागि: रूसी निरन्तर पिउन वोदका वा रूसी सबै कम्युनिस्टों, रूस मा धेरै छ. पढाइ धेरै प्रश्न, म देख्न मा धेरै अमेरिकी सबै छैन, प्रतिनिधित्व रूपमा बाँच्न रूस मा, धेरै लाग्छ, उदाहरणका लागि: रूसी निरन्तर पिउन वोदका वा रूसी सबै कम्युनिस्टों, रूस मा धेरै चिसो छ । एकै समयमा, यो धेरै रोचक छ मलाई मान्छे बाँच्न अमेरिका मा. सामाजिक सम्बन्ध, धर्म, त्यसपछि जीवित सरल अमेरिका, प्रशिक्षण, को सम्बन्ध पुरुष र महिला, र सबै बाँकी छ । यदि कसैले अध्ययन रूसी — म मदत गर्न सक्छ. मलाई थाहा छैन कि, यो बाहिर बारी मा मलाई कहिले आउनुहुन्छ अमेरिका, र यो सबै को आँखा, तर यो रोचक छ मलाई । म एक विवाहित महिला देखि युक्रेन, हामी विवाह गरेका थिए वर्ष को लागि र म यात्रा धेरै पटक उनको पूरा गर्न नातेदार र उनको परिवार त्यहाँ छ । के देखि देख्न सक्थे म त्यहाँ थियो बीच कुनै फरक क्यानाडा र यूक्रेनियन भन्दा अन्य भाषा छ । यो क्यानाडा काम एक धेरै अधिक, तिनीहरूले काम मा आफ्नो जब लामो र कठिन, लगभग आफूलाई हत्या देखि, छ, एक ठूलो फरक छ । र क्रम मा यो गर्न कठिन अब काम तिनीहरूले सक्दैन रक्सी पिउन, त्यसैले गर्दा यूक्रेनियन प्रेम आफ्नो रक्सी, कम र कम क्यानाडा छन् रक्सी पिउने यी दिन, पनि बियर दुर्लभ छ । भाषा सबैभन्दा ठूलो फरक छ । भने सबैलाई कुरा अंग्रेजी वा सबैलाई बताउनुभयो रूसी, तपाईं सक्छ विनिमय, मान्छे को एक देश देखि अन्य मा अनियमित र कुनै एक फरक याद छ । अमेरिका, त्यसपछि बाहिर पाउन मदत गर्न तरिकामा सबै को हजारौं को अमेरिका यात्रा गर्दै छन् जो गर्न पूर्वी युरोप को खोज मा महिलाहरु को या त, तिनीहरूलाई मदत संग भेट्टाउने आफ्नो बाटो शहर बीच, वा अपार्टमेन्ट भाडामा लिने, वा भेट्टाउने एक स्थानीय अनुवादक तिनीहरूलाई लागि, भनेर बाटो तपाईं प्राप्त हुनेछ बनाउन सयौं को मित्र, एक बिट अधिक पठनीय छ ।) म एक साधारण रूसी मान्छे छ । मंच लागि धेरै दिन र यति धेरै प्रश्न म मा यहाँ देखाए कि मलाई धेरै अमेरिकी, बरु केवल तिर्नुपरेको जस्तै, रूसी सबै समय वा रूसी कम्युनिस्टों, रूस छ धेरै चिसो आदि.
कसरी आफ्नो सामाजिक जीवन जा रहेको छ. आफ्नो धर्म, मिति वा जे छु, म बस मा रुचि केहि विषयमा एक सरल, सामान्य जीवन, साधारण मान्छे र कुराहरू जस्तै । पनि, भने कसैले चासो सिक्ने रूसी, म सोच्न, म हुन सक्छ उपयोगी छ । मलाई थाहा छैन जब, तर एकदिन म लागिरहेको छु भ्रमण गर्न हामीलाई देख्न, यो मेरो आफ्नै आँखा । राम्रो जवाफ, तर म छु केहि धाराप्रवाह र प्रयास गर्न थप जान्नुहोस्. पुरानो तिर्नुपरेको छ कि तपाईं सबै कम्युनिष्ट र पिउन वोदका सबै समय. म जस्तै रूसी फिलिमहरु र पुस्तकहरू, विशेष गरी जलेको द्वारा, सूर्य र हाल हुँ पढाइ सोभियत महिला: हिँडिरहेका, एक पुस्तक म खटाइयो पढ्न कलेज मा धेरै वर्ष पहिले । यो धेरै रोचक पुस्तक जीवन बारे समयमा महिलाहरु को लागि साम्यवाद, र म चाहनुहुन्छ के थाहा कुराहरू जस्तै हो अब त्यहाँ छ । त्यसैले, म छु, सिक्दै पनि छन् । राम्रो किस्मत । डस. म आशा गर्छु म मदत गर्न सक्छ र तपाईं आशा मदत गर्न सक्छ, मलाई एक रूसी गाह्रो भाषा, मेरो लागि, तर म हेवन माथि दिइएको छ । म. म बस पढ्न भनेर हिजो केही ठाउँमा रूस मा गर्मी मा प्राप्त गर्न सक्छन् रूपमा तातो रूपमा डिग्री छ । म यो प्रेम हुन डिग्री गर्मी लागि मलाई । म भने कहिल्यै रूसी निरन्तर. म शर्त रूसी पिउन अमेरिकी बियर कहिलेकाहीं.
वा अमेरिकी-जस्तै बियर । र मलाई थाहा छ मान्छे बाँच्न मा, रूस. म पहिले उल्लेख, कि तिनीहरू मासु खान जस्तै जाडो समयमा बच्न । यो चिसो प्राप्त. यो पनि उत्तर कोरिया र रूस को उत्तर, उत्तर कोरिया । तपाईं राख्न.
गुगल भन्छन् यो
तर हेर्न । हामी सिक्न छन् रूसी बिना कम्प्युटर, ? निस्सन्देह, हामी एक आवश्यकता कम्प्युटर कुराकानी गर्न रूपमा मित्र । नमस्कार न्यूयोर्क देखि जहाँसम्म मलाई थाहा छ, रूसी मा पुरुषहरु धेरै परम्परागत तुलना अमेरिकी मानिसहरू । अमेरिकी महिला प्रेम रूसी युरोपेली पुरुष, र हामी विचार कि तपाईं मान्छे साँच्चै राम्रो छ । तपाईं पूरा हुनेछ, यति धेरै मान्छे को विभिन्न प्रकारका अमेरिका मा, यो छ गर्न कठिन समूह हामीलाई सबै मा सँगै एक स्टीरियोटाइप (अलग हुनबाट चर्को र मायालु ह्यामबर्गर्स). तपाईं कहिल्यै पूरा एक अमेरिकी दिने तपाईं एक हार्ड समय, बस सम्झना यो हुन्छ कि मान्छे को सबै जात यहाँ । न्यूयोर्क मा, धेरै छन्, विभिन्न जात को मान्छे, आप्रवासी, र पहिलो-पुस्ता परिवार छ । न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया, ओरेगन, र कनेक्टिकट धेरै ठाउँमा भ्रमण गर्न तपाईं यात्रा गर्दै छन् भने. तिनीहरूले धेरै यात्रा र व्यापार मान्छे को लागि अवसर को अन्य देशहरू. अधिकांश मानिसहरू यहाँ गर्न पनि व्यस्त छन् तिर्नुपरेको वा ख्याल जहाँ तपाईं देखि हो. हामी मूल्य मान्छे आफ्नो राय मा, आफ्नो निष्पक्षता, र कति तिनीहरूले आदर आफूलाई । मानिसहरूलाई हुनेछ शायद न्याय गर्न तपाईं सम्म तपाईं कुरा सुरु — यो तपाईं भन्न के भन्ने विषयमा । यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईं पूरा आफैलाई आदर र सम्मान छ । यदि मान्छे देख्न सक्छौं कि तपाईं विश्वस्त छैनन्, तिनीहरूले फाइदा हुनेछ कि — बस अमेरिका मा, तर जताततै । सबै अमेरिकी भन्ने लाग्छ रूसी पिउन पनि धेरै वोदका वा जलाइएको द्वारा सूर्य । वास्तवमा, हामी रूस जस्तै छ । हाम्रो चलन छैन सधैं नै भएको छ, तर आफ्नो संस्कृति धेरै रोचक छ । यो हेर्न राम्रो छ, मान्छे मा मेरो समुदाय माथि वार्मिंग गर्न रूस, ट्विटर, र सामाजिक सञ्जाल साइटहरु को लागि राम्रो हो बैठक अमेरिकी मान्छे छ । तपाईं एक विद्यार्थी छन् भने, धेरै साइटहरु छन् पाउन मदत गर्न सक्छ कि एक पाहुना परिवार । तपाईं कुरा गर्न सक्छौं भने मलाई तपाईं बारेमा कुनै प्रश्न छ अमेरिकन जीवन । शीत युद्ध युग, र आज रिसेट लागि जिम्मेवार छन्. र धेरै मान्छे बरु जारी लाग्छ कि बाटो कुनै कुरा के. यो अधिकतम उपयुक्त पत्ता लगाउन एक साधारण गतिविधि. कलेज अक्सर गोल्फ उपकरण वा विद्यार्थी घटनाहरू र घटनाहरू छन् कि एक उल्लेखनीय धन्यवाद पूरा गर्न मान्छे । प्रक्रिया मा यो गर्मी मौसम ती हुनेछैन ऊर्जावान, अझै रूपमा चाँडै शरद ऋतु सेमेस्टर सुरु हुन सक्छ त्यहाँ प्रशस्त छ । यो परिचितों म स्कूलमा छैनन् मेरो, अतिरिक्त त मान्छे देखि यो प्रयोगशाला वा विद्यार्थी सरकार । भने यो एक समुदाय कलेज यो छ केहि अतिरिक्त स्थिर बनाउन परिचितों अधिकतम रूपमा व्यक्ति छन्. आफ्नो अंग्रेजी राम्रो पालन गर्न गाह्रो छ । तपाईं काम गर्नुपर्छ अधिक मा आफ्नो व्याकरण. र बस मित्र बन्न कसैले संग कहीं देखि, बस आफैलाई हुन । इमानदार, अमेरिका लागि हरेक नस्ल छैन, बस रूसी. इमानदार छन्, धेरै कम रूसी. त्यसको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्. बस आफैलाई हुन र छैन पनि कडा प्रयास छ सबै को सल्लाह म छ कि, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, उत्पीडन वा गोपनीयता चढाइ, प्रतिरूपण, कसरी गर्छ देश को रूस साँच्चै राम्रो पूर्वाधार र सुन्दर ठाउँमा संग एक कठिन सेना जब यो अर्थव्यवस्था नजिक छ मेक्सिको. जहाँ मूल गर्नुभयो देखि मान्छे आउन. (बारेमा कुरा, पूर्व सोभियत संघ उपग्रह राज्य) हो, तिनीहरूले पूर्व. कसरी गर्छ देश को रूस साँच्चै राम्रो पूर्वाधार र सुन्दर ठाउँमा संग एक कठिन सेना जब यसको अर्थव्यवस्था नजिक छ मेक्सिको
← वेबसाइट डेटिङ
मा बनाएको फ्रान्स →